ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာ ၁၅ မျိုး လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာ ၁၅ ခု
Isabel ကာတာလနျ | 05/10/2021 09:00 | လက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
ကလေးတွေကအိမ်မှာပျင်းပြီးပျော်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ နောက်ပို့စ်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည် 15 ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာ ၎င်းကို jiffy ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့သည်ယာဉ်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်နှစ် ဦး စလုံးပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်၊ သူတို့သည်လက်မှုပညာကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးကစားနိုင်သည်။
ဤလက်မှုပညာများပြုလုပ်ရန်သင်များစွာသောပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အမှန်တော့သင်ကလက်မှုပညာဝါသနာပါလျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများမှအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သော်လည်း၊ ယခင်အခါများ၌၎င်းတို့များစွာကိုသင်ဧကန်မုချရလိမ့်မည်။ လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
4 ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ခရစ်စမတ် reindeer အဆင်တန်ဆာ
5 ခရစ်စမတ်အတွက်လက်မှုပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။ Snowman
7 လွယ်ကူသော piggy bank ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောနို့မှုန့် (သို့) အလားတူပုလင်း
8 အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်များဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ရန်ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများ
9 ကတ်ထူပြားနှင့် crepe စက္ကူလိပ်ပြာ
13 ပြန်လည်အသုံးပြုကစားစရာများ: မှော်ပုလွေ
15 Hoops ဂိမ်း
ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာများထဲမှဤအရာကိုသင်တွေ့နိုင်သည် စူပါဟီးရိုးများကိုကတ်ထူပြားများနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်မရ။ သင်လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများမှာ popsicle stick၊ ကတ်ထူပြားနှင့်အရောင်အမှတ်အသားတို့ဖြစ်သည်။
ဒီလက်မှုပညာရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့မင်းမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအဲဒါကိုလုပ်နိုင်ပြီးကလေးတွေလည်းကစားနိုင်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကလေးများ၏နာမည်၏ကန ဦး နှင့်အရောင်များနှင့်စူပါဟီးရိုးများ၏စာကိုပင်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤပဟေိသည်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည် ၎င်းကိုအလှဆင်ရန်ကိန်းဂဏန်းမျိုးစုံကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ခံစားခဲ့ရသောအ ၀ တ်၊ အပ်ချည်၊ အထူတစ်ချောင်းနှင့်ကော် velcro တို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဤအရာသည်ရောင်စုံကတ်ထူပြား၊ ခေါက်စက္ကူ၊ ကတ်ကြေး၊ ကော်နှင့်အမှတ်အသားများကဲ့သို့သင်၏အိမ်တွင်သင်ရှိပြီးသားပစ္စည်းအနည်းငယ်ဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကိရိယာများအားလုံးဖြင့်သင်ဤအရာကိုဖန်တီးနိုင်သည် သတင်းစကားဆိုင်းဘုတ် အိမ်၏အခန်းခလုတ်များပေါ်တွင် သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။ ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူတံခါးလက်ကိုင်ဆိုင်းဘုတ်.
ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်စွယ်စုံဆုံးသောအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အလှဆင် (သို့) ဤရက်များအတွင်းအထူးတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်အဖြစ်
၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့်မိသားစု၏အသေးငယ်ဆုံးသည်၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကတ်ထူပြားတစ်ချောင်း၊ ခဲတံ၊ အနက်ရောင်အမှတ်အသား၊ အရောင်ဘောလုံးအချို့နှင့်ပို့စ်တွင်သင်မြင်နိုင်သောအခြားအရာများသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ခရစ်စမတ် reindeer အဆင်တန်ဆာ.
စက္ကူလိပ်အလွတ်များ၊ အမြှုပ်ရာဘာများ၊ ပန်းများ၊ ခံစားချက်များ၊ အမှတ်အသားများနှင့်အခြားအထောက်အပံ့အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကလေးများ၏အခန်းကိုအလှဆင်ရန် (သို့) ခဏအပန်းဖြေရန်ကစားစရာအဖြစ်သုံးရန်ရလဒ်သည်အလွန်ကောင်းသည်။
ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်အားလုံးကိုသင်ကြည့်လိုလျှင်ပို့စ်ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ခရစ္စမတ်အတွက် Recycling Crafts: Snowmanမရ။ ဒါဟာမင်းကိုသေချာကြည့်ကောင်းလိမ့်မယ်။
ဤခရုပြုလုပ်ရန်အဓိကပစ္စည်းမှာကတ်ထူပြားဖြစ်သည်။ မင်းအိမ်မှာအများကြီးရှိတာသေချာတယ်။ မင်းအဲဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲမင်းကြည့်ချင်လား။ ပို့စ်ထဲမှာ ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ရန်ကတ်ထူပြားခရု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
လွယ်ကူသော piggy bank ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောနို့မှုန့် (သို့) အလားတူပုလင်း
ယခုနှစ်သစ်သည်စတင်သောအချိန်၌ကလေးများအားသူတို့၏လက်ဆောင်များနှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်နိုင်ရန်သူတို့၏လစာကိုချွေတာရန်သင်ကြားရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းကဒါကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ပါ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောနို့မှုန့်ဘူးတစ်ဘူးနှင့် piggy bankမရ။ ၎င်းသည်လှေငယ်၊ သိုးမွေးအနည်းငယ်၊ သစ်ခုတ်စက်နှင့်ပူပြင်းသောဆီလီကွန်တို့လိုပစ္စည်းအနည်းငယ်လိုအပ်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ piggy bank ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုသင်သိလိုလျှင် post ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် နို့မှုန့်အမျိုးအစားလုပ်နိုင်သည့်ပြန်လည်သန့်ရှင်းလွယ်ကူသော piggy bank.
အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်များဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ရန်ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများ
ကလေးငယ်များအား၎င်းတို့၏ကျောင်းအသုံးအဆောင်များကိုပျော်စရာကောင်းပြီးမူလပုံစံအတိုင်းအလှဆင်လိုပါသလား။ ပြီးရင်ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ အိမ်သာစက္ကူလိပ်များနှင့်အတူတံဆိပ်ခေါင်းဖို့ဂျီ ometric မေတြီပုံစံများ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာမင်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းအနည်းငယ်နဲ့လျှပ်တစ်ပြက်မှာသင်လုပ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လွယ်ကူတဲ့လက်မှုပညာတစ်ခုပါပဲ။ အမှတ်အသားများ၊ အိမ်သာသုံးစက္ကူပုံးနှင့်မှတ်စုစာအုပ်အချို့သာလိုအပ်လိမ့်မည်။
ကတ်ထူပြားနှင့် crepe စက္ကူလိပ်ပြာ
ကတ်ထူပြားအနည်းငယ်၊ ခရင်မ်စက္ကူ၊ အမှတ်အသားများနှင့်ကော်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်ရာများမှာဤအရာဖြစ်သည် cardstock နှင့် crepe စက္ကူလိပ်ပြာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အချိန်ကြာကြာမကြာပါ၊ ကလေးများအခန်းကိုအလှဆင်ရန်အဆင်တန်ဆာသေးသေးလေးတစ်ခုချက်ချင်းရလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ ကတ်ထူစက္ကူနှင့် crepe စက္ကူလိပ်ပြာ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာလာသည်ကိုအဆင့်ဆင့်ရှင်းပြသည်။
ကလေးများသည်အိမ်၌လှည့်ပတ်သွားရန်ဆေးသုတ်ရန်ခဲတံ၊ ခဲတံနှင့်အမှတ်အသားများကိုစုဆောင်းလေ့ရှိသည်။ ပန်းချီကားများတစ်နေရာတည်းတွင်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိစေရန်ဤအရာကိုကြိုးစားလုပ်ပါ ကလေးများခဲတံစည်းရုံးအိုး.
ဤ ဗီဒိုများကိုအမွှေးနံ့သာများထည့်ရန်အိတ်များ ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကလေးများအားအချိန်ကောင်းကောင်းပေးခြင်းအပြင်အဝတ်အစားများအတွက်အနံ့နှင့်စိုထိုင်းဆများမ ၀ င်စေဘဲသဘာဝလေသန့်စင်စက်အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည်မျက်စိကျစေသော၊ လက်တွေ့ကျပြီးလက်ဆောင်များအတွက်စုံလင်သည်။ တူညီသောနေ့လည်ခင်းတွင်သင်သည်ပန်းထည်အနည်းငယ်၊ ပန်းခြောက်နှင့်လာဗင်ဒါ (သို့) သစ်ကြံပိုးခေါက်အနှစ်တို့ဖြင့်အများအပြားပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤလက်မှုပညာကိုပြုလုပ်ရန်ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကိုသိရန်ငါ post ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုသည် ဗီဒိုအတွင်းရေမွှေးထည့်ရန်အဝတ်အိတ်များမရ။ ဗီဒိုတွေကိုဖွင့်ရတာပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။
အဖြူရောင် Sneaker အချို့ကိုအမှတ်အသားများဖြင့်အလှဆင်ပါ ၎င်းသည်သင်ပြုလုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်အလှဆုံးလွယ်ကူသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များကိုရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုရေးဆွဲရန်သင်ကူညီနိုင်သည်။ ဖိနပ်တစ်စုံနှင့်အနီရောင်နှင့်အစိမ်းဖျော့အမှတ်အသားနှစ်ခုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။
ချယ်ရီသီးဒီဇိုင်းကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည် (သို့) သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို သုံး၍ သင်အကြိုက်ဆုံးကိုခြယ်မှုန်းနိုင်သည်။ ပို့စ်ထဲမှာ နွေရာသီအတွက်အလှဆင်ဖိနပ် ဤလက်ရာကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်ဗီဒီယိုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
တစ်ခါတစ်ရံအရိုးရှင်းဆုံးကစားစရာများသည်ကလေးများအတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနှင့်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိစဿစဖြစ်သည် မှော်ပုလွေမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်လုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီအရုပ်ကိုပြုလုပ်ဖို့သင်အိမ်မှာရှိသည့်ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည် ဆိုဒါကိုစုပ်ရန်ကောက်ရိုးများသို့မဟုတ်ကောက်ရိုးများမရ။ မင်းမှာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုစူပါမားကတ်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကောက်ရိုးများ မှလွဲ၍ သင်တိပ် (သို့) တိပ်အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကော်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်တိပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်များစွာပိုကောင်း၊ လုပ်ရပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုလုံခြုံလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုငါအကြံပြုသည်။ မင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ မင်းမှာအရာနှစ်ခုလောက်ပဲလိုတယ်။
သင်ပြန်လည်အသုံးပြုလိုလျှင်၊ သင်ပြုလုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာမှာအခြားတစ်ခုဖြစ်သည် ခဲတံဂိုးသမားကြောင် မင်းအိမ်မှာရှိအိမ်သာသုံးစက္ကူကတ်ထူပြားလိပ်များနှင့်။ ကျန်အချို့အတွက်အမှတ်အသားများ၊ ကတ်ကြေးတစ်စုံ၊ ကော်အနည်းငယ်နှင့်လက်မှုမျက်လုံးအချို့ မှလွဲ၍ သင်များစွာလိုအပ်လိမ့်မည်။
Este ကွင်းအစုံ ၎င်းသည်သင်အိမ်တွင်ရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သောကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကတ်ထူပြားအနည်းငယ်၊ မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူကတ်ထူပြားတစ်လိပ်၊ အမှတ်အသားများနှင့်ကော်များသည်သင်အားအိမ်တွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်ပြင်၌ဖြစ်စေကစားနိုင်သောဤကစားနည်းကိုပြုလုပ်ရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။
ဤလက်စွပ်အစုံကိုမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလော။ ပို့စ်ကိုကြည့်ပါ ကွင်းအစုံ အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ » ကလေးများအတွက်လွယ်ကူသောလက်မှုပညာ ၁၅ ခု
Halloween ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များကိုအလှဆင်ရန်စိတ်ကူး ၄ ချက်